ဘားအံ (ဆဒ္ဒန်ဂူ-ကျုံထော်ရေတံခွန်) ခရီးစဉ်-၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Local Guides » ဘားအံ (ဆဒ္ဒန်ဂူ-ကျုံထော်ရေတံခွန်) ခရီးစဉ်-၁	14
Posted by Phyu Myat Pearl on Jan 12, 2016 in Local Guides, Photography, Travel | 14 comments
Possible Travel & Tours (https://www.facebook.com/possibletravels) ရဲ့ 
ဘားအံဘုရားဖူးနေ့ချင်းပြန်ခရီးလေးတစ်ခုကို ၂၀၁၆ ၊ ဇန်န၀ါရီလ ၃ရက်နေ့ကသွားခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်မှတ်တန်းလေးပါ။
ဒါကတော့ သူတို့ fb page မှာရေးထားတဲ့ကြော်ငြာလေးပေါ့။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လှပတဲ့ ရေတံခွန်တွေ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဂူတွေများတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်သို့တစ်ရက်တာ
~~~~ ကရင်ပြည်နယ် ကျုံထော်-ဆဒ္ဒန်ဂူ ခရီးစဉ် ~~~~
‪#‎Jan9‬, ‪#‎Jan16‬, ‪#‎Jan23‬, ‪#‎Jan30‬ ‪#‎Feb6‬ ‪#‎Feb11‬ ‪#‎Feb12‬ ‪#‎Feb13‬
ကရင်ပြည်နယ် ရဲ့ အလှဆုံး ရေတံခွန်ဖြစ်တဲ့ ကျုံထော်ရေတံခွန်
လှေကလေးစီးပြီး သွားရတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆဒ္ဒန်ဂူ
ကရင်ပြည်နယ် ရဲ့ Trade Mark နေရာဖြစ်တဲ့ သာမညဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ခဲ့တဲ့ ဇွဲကပင်တောင်ခြေက ကျောက်ကလပ်
နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဂူ တစ်ဂူဖြစ်တဲ့ အေဒီ၆ ရာစုကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ကော့ဂွန်းဂူ
သက်တောင့်သက်သာ ရှိသော အဆင့်မြင့် Scania Express
သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော စားသောက်ဆိုင်များတွင် ဧည့်ခံမည့်
ယဉ်ကျေးဖော်ရွေတဲ့ Tour Leader/ Guide
ရေသန့်၊တာဝါ၊သွားပွတ်တံ ၊ သွားတိုက်ဆေး
ခရီးထွက်ဖို့စုံစမ်းတော့ ည၉နာရီခွဲကားထွက်မယ်ဆိုလို့…အော် ဘားအံကိုတော့ အစောကြီးရောက်နေမယ်လို့တောင်ထင်မိသေး..။
ကားလက်မှတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်ကြတော့ ကားက ၁၁နာရီမှာ အောင်ဆန်းကွင်းကထွက်လာမှာမို့ အနီးဆုံးစုရပ်ဖြစ်တဲ့ ပြည်လမ်းက တံတားဖြူမှတ်တိုင်ကို သူတို့ကားထွက်လာပြီဖုန်းဆက်မှထွက်လာပါလို့ပြောပါတယ်။
ကားပေါ်မှာ အဲကွန်းက အရမ်းအေးတတ်လို့ ခြုံစောင်ပေးလားမေးကြည့်တော့ တစ်ချို့ကားတွေကတော့ ပေးပါတယ် မသေချာလို့ စောင်အပါးလေးတစ်ထည်လောက်ထည့်ခဲ့ပါဆိုလို့ ကျောပိုးအိတ်ထဲကို စောင်အပါးကော၊ အနွေးထည်၊ ပုဝါ၊ မျတ်မှန်၊ ကင်မရာ၊ ဓါတ်မီး၊ Selfie Stick၊ အမူးပြေဆေး၊ စားစရာမုန့်ထုပ်တွေအပြင် ကျုံထော်ရေတံခွန်ရောက်ရင် ရေကစားကြမှာမို့ အိမ်ကျီ င်္အပိုတစ်စုံစီပါထည့်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ကားက ၁၁နာရီခွဲခါနီးလောက်မှ သူတို့ဂိတ်ကထွက်လာပြီဖုန်းဆက်လို့ အိမ်ကနေကားဌားထွက်ပြီး မှတ်တိုင်မှာ သွားစောင့်ကြခဲ့ကြတယ်။ ပြည်လမ်းပေါ်မှာက ဒီအချိန်ကြီး မှတ်တိုင်မှာစောင့်နေကြတာဆိုတော့ လှည့်ကင်းရဲ ဆိုင်ကယ်ကလာစပ်စုပြီပေါ့..။ ဘယ်သွားမှာလဲ ဘာလဲပေါ့။ ဘုရားဖူးကားစောင့်နေကြတာပေါ့..။ တက်ကစီများကလည်း တက်စီလား ဘာလားနဲ့ မလိုက်ပါဘူးဆိုတာတောင် ဘီးမရွေ့ပဲ မေးနေကြသေးတယ်လေ။ ကားကလည်း အချိန်မှန်ပါတယ် ရန်ကုန်အထွက်တင် ၁၂နာရီကျော်ပါပြီ။
ကားပေါ်ရောက်တော့ ဂွမ်းစောင်တွေ တစ်ယောက်တစ်ထည်ပေးပါတယ်။ လမ်းမှာ ၂နာရီလောက်ကျတော့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဝင်မုန့်စားတယ်။ မြောင်းမြဒေါ်ချို မုန့်ဟင်းခါးတဲ့..အဲ့ဒါပဲ ၀ယ်စားလိုက်တယ်။ အရသာကတော့ စားကောင်းပါတယ်။
မနက် ၇နာရီခွဲမှာ ဘားအံက ဆဒ္ဒန်ဂူကိုရောက်ပါတယ်။ ဂူဘက်ကို သွားတဲ့ကားက သပ်သပ်ထပ်စီးရတာပါ။ Tour ကားကနေ နောက်ထပ်ကား၂စီးသပ်သပ်ထပ်ဌားပါတယ်။ အဲ့မှာ ယောက်ျားလေးတွေကို ခေါင်မိုးပေါ်တက်စီးခိုင်းပြီး မိန်းကလေးတွေကိုတော့ ကားထဲစီးရပါတယ်။ ကတ္တရာလမ်းကနေ အဆုံးမှာတော့ မြေနီလမ်းလား မြေ၀ါလမ်းလားတော့ မသိ ဖုန်ထချက်ကတော့ နိုင်းလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ Mask တွေယူသွားကြပါ။ ဒါတောင် မနက်အစောပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။ ကားထဲကလူတွေကတော့ မျတ်မှန်တပ်ပြီး ပါလာတဲ့သဘက်တွေကိုခေါင်းမြီးချုံထားရတယ်။ ကားခေါင်မိုးပေါ်ကလူတွေကတော့ ဘယ်လိုနေပါလိမ့်။
အဲ့မှာ အလှူငွေလှူဖို့နေရာလေးရှိပါတယ်။ ဆေးဖက်ဝင်ကျောက်သွေးဆိုလား မဲမဲအထုပ်လေးတွေ လက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အလှူငွေ ၁၀၀၀လှူခဲ့ပြီး ကျောက်သွေးထုပ်လေး ၂ထုပ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါကသူတို့ပေးတဲ့ စာရွက်လေးပါ။
ဂူအတွင်းပိုင်းမှာ မှောင်တဲ့အတွက် လျှောက်လမ်းတစ်လျှောက် လျှပ်စစ်မီးသီးလေးတွေထွန်းထားပါတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ကတော့ Flash မီးဖွင့်ရိုက်မှ ရပါမယ်။
ဂူထဲမှာ အေးစိမ့်နေပြီးတော့ မြေပြင်တွေ ကျောက်တုံးတွေက အနည်းငယ်ချောလို့ လူကြီးတွေအတွက်
သတိထားရပါမယ်။ မတ်စောက်တဲ့ ကျောက်လှေခါးလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဂူထဲကနေ လမ်းဖြတ်လျှောက်ပြီးနောက် ဒီဘက်ဂူပေါက်ဝသို့ ရောက်ပါပြီ
About Phyu Myat Pearl
Myat Pearl Phyu has written 1 post in this Website..
View all posts by Phyu Myat Pearl →	Blog
Myat Pearl Phyu says: လူပုံတွေပါနေလို့ သည်းခံပေးပါနော်.. ဟိဟိ :D
Ma Ma says: သည်းခံပါတယ်။
ဖျက်ထားတာလေးက လွဲလို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 38
Myat Pearl Phyu says: ရှုခင်းသပ်သပ်ရိုက်ထားတာ မဟုတ်လို့ပါ..ရုပ်တွေက မလှတာလည်းပါပါတယ်. အန်တီ မမ …ဟီး :D
alinsett says: ဆိုတော့….
ရွာထဲကလူတွေက… ဒီရွာသူရဲ့ မျက်နှာကို မြင်ခွင့်မရှိပေါ့နော်…
.မြင်မိရင် မူးမေ့လဲကုန်မှာစိုးလို့ ဖျက်ထားတာလား…
.ဂူလမ်းတလျှောက်… တွေ့ရတဲ့ ကျောက်ခက်ကျောက်နွယ်တွေက…သဘာဝ ပန်းပုလက်ရာတွေ…
.မှောင်ပြီး…စိုထိုင်းထိုင်း ဖြစ်နေတဲ့အတွက်… စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်တာလွဲရင်… စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဂူပါ။
Myat Pearl Phyu says: ဖဘအပ်ထားရင် ပုံတွေတင်ထားတာပဲကိုးး..ဂဇက်ဂုပေ့မှာလည်း ၀င်ထားပါတယ်..စက်စက်ရဲ့ …
အဲ့ဂူက မှောင်ပီးစိုထိုင်းထိုင်းဖြစ်နေတာပဲ သိတော့တယ်…အထဲကို အတော်ဂရုစိုက်သွားနေရတော့
ထွက်ပေါက်ရောက်ပြီး လှေဘယ်နားစီးရမလဲပဲ စိတ်အားထက်သန်နေကြတာ…
လှေက လူးခါးနေတော့ ကြောက်လိုက်တာ..
ဆက်ဖီစတစ်တွေနဲ့ ကိုယ်လေးကို ငြိမ်၂ ထားပီး
လှေစီးခ တစ်ယောက် ၁၀၀၀ ပေးရပါတယ်ချင့်..။
လှေစီးပြီးတော့ တောင်ကိုပတ် ၊ စပါးခင်းဘေးကနေ
၁၀ မိနစ်လောက် ဂူပေါက်ဘက်ကို လမ်းပြန်လျှောက်လိုက်ရပါတယ်ချင်။
kai says: အရမ်းလှနေလို့နေမှာပါ…။ fb အကောင့်ဖော်လိုက်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 38
Myat Pearl Phyu says: ပြောင်းပြန်ပါ တဂျီး … အကောင့်ကဒိနာမည်ပဲ ရွာဂုထဲမှာရှိပီးသားပါချင့်။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .မရောက်ဖူးသေးဘူး..သွားအုံးမယ်
Myat Pearl Phyu says: တောင်ငူ-သံတောင်ကြီး-ဖိုးကျားဆင်စခန်းခရီးထက် ဒီခရီးကတော့ ပိုတန်တယ်ပြောရမယ် ဦးမိုက်ရေ..။
အောင် မိုးသူ says: ဆဒွန်ဂူတော့ရောက်ဖူးချင်မိ လမ်းနည်းနည်းကြမ်းတယ်လို့လည်း ကြားတယ်။
Myat Pearl Phyu says: mask တွေယူသွားလေ…ဖုန်ထရုံပါပဲ..။ လှော်ကားဥယျာဉ်အတွင်းလမ်းလောက်တော့ မဆိုးသေးပါဘူး ခ်ခ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရန်ကုန်ကနေဆို ၇ နာရီပဲ မောင်းရတာလားး
Myat Pearl Phyu says: ဘားအံအထိက ၆ နာရီပဲ ကြတာ မမဆွိ…ကျုံထော်ရေတံခွန်ဘက်ကို အသွား ၂ နာရီထပ်ပေါင်းရမယ်..။ ကျုံထော်က ဝေးတယ်..။
Ma Ei says: ကရင်ထဲ ဆဒွန်ဂူ ကျုံထော် မရောက်ဖူးသေးဘူး
သွားလဲသွားချင်တယ် လှေစီးရမှာနဲ့ ပင်ပန်းမှာ ကြောက်လို့ရယ်…